जूनमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
सप्पोरो स्ट्रीट कार जुन १ 16, २०१ 2015 मा स्टेशनमा। सप्पोरो स्ट्रीट कार १ 1909 ० since देखि ट्राम नेटवर्क हो, जो सप्पोरो, होक्काइडो, जापान मा स्थित छ = शटरस्टक
यदि तपाइँ जापान मा जून को लागी यात्रा गर्न को लागी योजना बनाउनु हुन्छ, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईले आफ्नो यात्रामा Hokkaido जोड्नुहोस्। जापान सामान्यतया जुनमा वर्षा र चिसो हुन्छ। यद्यपि होक्काइडोमा यति धेरै वर्षाका दिनहरू छैनन्। टोकियो र ओसाका जस्तो नभई, तपाई मौसमको हिसाबले रमाइलो समयको आनन्द लिनुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म जून महिनामा होक्काइडोमा मौसमको बारेमा कुरा गर्ने छु।
तल जूनमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
जूनमा होक्काइडो बारे प्रश्न र उत्तर
जूनमा होक्काइडोमा मौसम (अवलोकन)
जूनको सुरूमा होक्काइडो मौसम
जूनको मध्यमा होक्काइडो मौसम
जूनको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के होक्काइडोमा जूनमा हिउँ पर्दछ?
जूनमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन।
के फूलहरु जून मा होक्काइडो मा खिलिरहेका छन्?
होक्काइडोको फुरानो र बिइमा जून महिनाको अन्तदेखि ल्याभेन्डर फूल्न थाल्छ।
यसै महिनामा खस्का र लुपिन पनि फूल्छन्।
जूनमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ?
मौसम जुन जुन मा होक्काइडो मा वसन्त देखि गर्मी को लागी परिवर्तन हुन्छ। सामान्यतया, यो चिसो छैन, तर यो बिहान र साँझ सुन्दर हुन सक्छ।
जूनमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ?
वसन्त लुगा जून मा होक्काइडो को एक आरामदायी यात्रा को लागी सिफारिस गरीन्छ। जापानमा वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ जाडो हिउँदार परिदृश्यको मजा लिन चाहानुहुन्छ, त्यसो गर्न जनवरी र फेब्रुअरी उत्तम महिनाहरू हुन्। यदि तपाईं सुन्दर फूलहरू हेर्न चाहानुहुन्छ भने जुलाई र अगस्टलाई सिफारिश गरिन्छ।
जूनमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
ग्राफ: जूनमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
तापक्रम बिस्तारै जूनको महिनामा होक्काइडोमा बढ्नेछ। जुनको अन्त्यमा, तपाइँ गर्मीको चाँडो वातावरण महसुस गर्न थाल्नुहुनेछ।
जुनमा जापानका धेरै ठाउँहरू वर्षा enteringतुमा प्रवेश गरिरहेका छन्। टोकियो, ओसाका, क्योटो र अधिकमा धेरै वर्षा दिनहरू छन्। वर्षाको दिनमा, त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जो मन्दिरहरू र मन्दिरहरू भ्रमण गर्छन् ताकि तपाईं शान्त वातावरणमा अन्वेषण गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि सत्य हो कि तपाई ताप र आर्द्रताबाट बच्न सक्नुहुन्न।
यद्यपि होक्काइडो आर्द्र छैन, यस समयमा यसलाई एक आदर्श वातावरण बनाउने। त्यहाँ धेरै दिनहरू छन् जुन अधिकतम तापमान २ 25 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ तर आर्द्रता तुलनात्मक रूपमा कम छ। यसैले जापानका अन्य क्षेत्रहरू भन्दा यो बढी आरामदायक छ।
यद्यपि यो वर्षा हुनेछ, त्यहाँ लामो वर्षाको मौसम छैन जस्तै टोकियो वा ओसाका। Biei शहर र Furano जस्ता दर्शनीय स्थलहरु मा, तपाईं सुन्दर फूल बगैचा हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यद्यपि, बर्षको यस समयमा पनि होक्काइडोमा बिहान र साँझ एकदम चिसो छ। जापान मेटेरोलोजिकल एजेन्सीले घोषणा गरेको होक्काइडोका लागि जूनको मौसम तथ्यांक तल छ। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, बिहान र साँझ १० डिग्री भन्दा कमसम्म चिसो हुनु यो असामान्य कुरा होइन। किनभने दिन र रातको बीचको तापक्रम फरक चरम हुन सक्छ, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईले न्यानो लुगाहरू जस्तै कार्डिगनहरू ल्याउनुहोस्।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (जूनको सुरूमा)
साप्पोरो २.20.2..11.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.13.6..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.19.0..10.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.14.3..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.21.4..10.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.4..XNUMX मिमी (-)
Biei २.20.5..7.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.19.8..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.21.2..9.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.18.8..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.14.7..8.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.19.1..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.16.6..8.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.17.0..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.17.1..7.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.6..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.13.3..6.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.27.9..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.13.8..7.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.34.1..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.19.5..8.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.27.3..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.18.8..10.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.1..XNUMX मिमी (-)
जून 09, 2018: योसाको सोरान फेस्टिवल। ओडोरी पार्क, सप्पोरो, होक्काइडोमा शक्तिशाली नृत्य प्रदर्शन परेड। धेरै टीमहरूले मूल नृत्य प्रदर्शन गर्दछ। पर्यटकहरूका लागि धेरै लोकप्रिय फेस्टिवल = शटरस्टक
जूनको सुरूमा होक्काइडोको हल्का वसन्त मौसम छ। यद्यपि टोकियो र ओसाकासँग तुलना गर्दा यो निकै राम्रो छ। बिहान र साँझ अझै पनि जाडो जस्तै लाग्न सक्छ।
यस समयमा, "YOSAKOI Soran महोत्सव" भनिने एक ठूलो स्तरको नृत्य महोत्सव साप्पोरोको मध्यमा ओडोरी पार्कमा आयोजना हुनेछ। कूल 30,000०,००० नर्तकहरू साथै २ लाख पर्यटकहरू भेला हुन्छन्।
जूनको शुरुमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :3: around57 छ र सूर्यास्त समय १ 19: १० तिर छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव 3: 39 is र सूर्यास्त समय १ 18::54 तिर हो।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (जुन बीचमा)
साप्पोरो २.21.4..12.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.17.0..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.19.9..12.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.15.5..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.22.8..11.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.20.0..XNUMX मिमी (-)
Biei २.22.0..9.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.20.1..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.22.6..11.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.17.5..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.15.6..10.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.15.4..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.17.2..9.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.20.2..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.17.8..8.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.4..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.14.6..7.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.37.5..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.15.3..9.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.40.0..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.21.0..10.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.2..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.19.9..12.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.27.1..XNUMX मिमी (-)
जून १,, २०१ 16: ओडोरी पार्क वरिपरि। ओडोरी पार्क सेपोरो, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकको बीचमा रहेको केन्द्रीय पार्क हो
मध्य जुनमा पनि, होक्काइडो अझै पसिलो छ। तपाईंको यात्रा धेरै सहज हुनेछ।
सप्पोरोको ओडोरी पार्क जुन जूनको शुरुमा उत्सवमा व्यस्त थियो, शान्त हुनेछ। तपाईं सुन्दर फूलहरू हेर्न यहाँ शान्त हिड्न सक्नुहुन्छ।
जूनको मध्यमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :3::55 छ र सूर्यास्त समय १ 19: १ around को आसपास छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव 3: 37 is र सूर्यास्त समय १ 19::00 तिर हो।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (जूनको अन्तमा)
साप्पोरो २.22.9..14.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.16.2..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.21.5..13.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.16.5..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.24.5..13.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.19.2..XNUMX मिमी (-)
Biei २.23.5..10.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.18.2..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.24.0..12.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.18.2..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.16.8..11.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.18.5..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.17.9..11.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.16.3..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.18.5..10.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.1..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.15.3..8.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.25.6..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.16.5..10.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.33.6..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.22.0..11.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.0..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.21.2..13.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.21.6..XNUMX मिमी (-)
जून २१, २०१:: फूल क्षेत्रको साथ टोमिटा फार्ममा गाईड पोष्ट। टोमिटा फार्म फुरानो, होक्काइडो, जापान मा सबैभन्दा प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण हो = शटरस्टक
जुनको अन्त्य सम्म, होक्काइडोमा पनि यो धेरै तातो हुनेछ। बिहान र साँझको तापमान पनि १० डिग्री सेल्सियससम्म बढ्छ। Furano र Biei जस्ता फूल क्षेत्र मा, फूलहरु आफ्नो सुन्दरता देखाउन सुरु हुनेछ।
जूनको अन्तमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :3::56 हुन्छ र सूर्यास्त समय १ 19: १। हुन्छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव 3: 38 is र सूर्यास्त समय १ 19::02 तिर हो।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले जून को शुरुवातको लागि 2019th औं समय, जून बीचको लागि १th औं समय जुनको अन्त्यको लागि २th औं समय पोस्ट गरे।